နှစ်(၃၀)အကြာမှာ သူ့ဇနီိးလောင်းဖြစ်လာတဲ့ ကောင်မလေးက တစ်ချိန်ကလမ်းပေါ်မှာ နမ်းခဲ့သောမိန်းကလေးဖြစ်နေ ဖြစ်ရပ် – KK Daily News
လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၃၀ က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Baguio မြို့ရှိတစ်နေရာရာမှာ ဒီကောင်လေးငယ်ဟာ ကျပန်းမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးဆီသို့ လမ်းလျှောက်သွားကာ သူမရဲ့နဖူးကိုတစ်ချက်နမ်းလိုက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးနောက် သူတို့ဟာ နှစ်အနည်းငယ် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဆယ်စုနှစ် ၃ ခုကြာပြီးနောက်မှာ သူတို့နှစ်ဦးဟာ အကြင်လင်မယားဖြစ်သွားခဲ့လိမ့်မယ်လို့ လုံးဝမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူး။ “အံ့သြစရာ တိုက်ဆိုင်မှုပါလား ၊ကံကြမ္မာ က ချစ်ခြင်းရဲ့မှော်ဖြစ်တယ်! ” လို့ Barbie Atienza က ထိုစုံတွဲရဲ့ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူများက သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး ကလေးငယ်များရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်သက်သာဖြစ်ပြီး အနာဂတ်မှာ အရွယ်ရောက်သူများအဖြစ်ထပ်မံတွေ့ဆုံတဲ့အခါလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်သာဖြစ်တယ်လို့ လူအများကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အချို့အင်တာနက်အသုံးပြုသူများက ထိုအဖြစ်အပျက်များကို မယုံကြည်ကြောင်းနှင့် ဇာတ်လမ်းကိုသာဖန်တီးနေတယ် လို့ ထင်ကြေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။အခြား netizens များက အရင်က သူတို့စုံတွဲရဲ့ အမှန်တကယ်တွေ့မြင်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံအဟောင်းများကို ရှာဖွေရန်တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။
သေချာတာပေါ့! ဒီစုံတွဲဟာ Baguio City မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက သူတို့ဓာတ်ပုံတွေထဲက အမှန်တကယ်ကလေးတွေဖြစ်ခဲ့တာကို စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“ မှော်ဆန်တာကို ယုံကြည်ရမယ်၊ သူစိမ်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ လူတွေ ဘယ်လိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေ့နေကြတယ်ဆိုတာ ငါ့ကိုပြောပြပါ” ဟု netizen တစ်ခုက မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါတယ်။
နှဈ(၃၀)အကွာမှာ သူ့ဇနီိးလောငျးဖွဈလာတဲ့ ကောငျမလေးက တဈခြိနျကလမျးပျေါမှာ နမျးခဲ့သောမိနျးကလေးဖွဈနေ ဖွဈရပျ
လှနျခဲ့သော အနှဈ ၃၀ က ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ Baguio မွို့ရှိတဈနရောရာမှာ ဒီကောငျလေးငယျဟာ ကပြနျးမိနျးကလေးငယျတဈဦးဆီသို့ လမျးလြှောကျသှားကာ သူမရဲ့နဖူးကိုတဈခကျြနမျးလိုကျပွီး ထှကျပွေးသှားခဲ့ပါတယျ။
ပွီးနောကျ သူတို့ဟာ နှဈအနညျးငယျ တှဆေုံ့ခဲ့ခွငျးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဆယျစုနှဈ ၃ ခုကွာပွီးနောကျမှာ သူတို့နှဈဦးဟာ အကွငျလငျမယားဖွဈသှားခဲ့လိမျ့မယျလို့ လုံးဝမထငျထားခဲ့ကွပါဘူး။ “အံ့သွစရာ တိုကျဆိုငျမှုပါလား ၊ကံကွမ်မာ က ခဈြခွငျးရဲ့မှျောဖွဈတယျ! ” လို့ Barbie Atienza က ထိုစုံတှဲရဲ့ဓာတျပုံမြားနှငျ့အတူ ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။